Tale of the Nine Tailed (Season 1) အပိုငျး (၇) | MM Movie Store
Tale of the Nine Tailed (Season 1) အပိုငျး (၇)
လီယှနျဆိုတာ အရပျရှညျရှညျ နဲ့ ထီးတဈခြောငျးကို ကိုငျရငျး လြှောကျသှားနတေဲ့သူတဈယောကျ….ဒီထီးက နယျနယျရရတော့မဟုတျဘူး..အရေးကွီးအစှမျးထကျတဲ့ဓားတဈခြောငျးအဖွဈပွောငျးလဲနိုငျသလိုသူ့ကိုလညျး စှမျးအားပွညျ့အသုံးခနြိုငျဖို့အထောကျအကူပွု လကျနကျဖွဈတယျ…
တကယျတော့သူဟာ လူသားတှနေဲ့မခွားနနေိုငျစှမျးရှိတဲ့ မွခှေေးတဈကောငျဖွဈပါတယျ….သူဟာ တဈစုံတဈယောကျကိုရှာဖှနေသေလို အဲ့ဒီကာလအတှငျးမှာလညျးအခြို့သောမွခှေေးတှကေို လိုကျသုတျသငျနတေဲ့သူဖွဈတယျ….
နမျဂြီအာဆိုတဲ့ကောငျမလေးကတော့ သဘာဝလှနျဖွဈရပျတှနေဲ့ ပရလောကတှဟော တကယျရှိတယျလို့ယုံကွညျနတေဲ့သူဖွဈပွီး အဲ့အကွောငျးအရာတှကေို လိုကျလံရှာဖှပွေီး တငျဆကျနတေဲ့ရုပျသံလိုငျးကပီဒီတဈဉီးပေါ့…….လီယှနျဆိုတဲ့မွခှေေးဟာ ဘာကိုလိုကျရှာနတောလဲ….
ဒီလောကကွီးထဲမှာ လီယှနျလို လူသားပုံဖွဈနတေဲ့မွခှေေးတှဘေယျလောကျမြားနပွေီလဲ…. လူသားတှကေိုရောဒုက်ခပေးနိုငျလား…..သူတို့လို မွခှေေးတှကေို နှိမျနှငျးနတေဲ့ တခွား မိစ်ဆာကောငျတှရေောရှိနိုငျလား….နမျဂြီအာဆိုတဲ့ကောငျမလေးနဲ့ရော ဘယျလိုတှေ တှဆေုံ့ကွမလဲ….
ဒီဇာတျလမျးတှဲက အကျရှငျခနျးတှကေ တျောတျောမိုကျသလို သဘာဝလှနျစှမျးအားတှကေိုအသုံပွုပွီး ဗငျြးတဲ့အခနျးတှဆေိုလညျး တျောတျောကွညျ့ကောငျးပါတယျ….စောငျ့မြှျောကွညျ့ရှုကွပါကုနျ….
လီယွန်ဆိုတာ အရပ်ရှည်ရှည် နဲ့ ထီးတစ်ချောင်းကို ကိုင်ရင်း လျှောက်သွားနေတဲ့သူတစ်ယောက်….ဒီထီးက နယ်နယ်ရရတော့မဟုတ်ဘူး..အရေးကြီးအစွမ်းထက်တဲ့ဓားတစ်ချောင်းအဖြစ်ပြောင်းလဲနိုင်သလိုသူ့ကိုလည်း စွမ်းအားပြည့်အသုံးချနိုင်ဖို့အထောက်အကူပြု လက်နက်ဖြစ်တယ်…
တကယ်တော့သူဟာ လူသားတွေနဲ့မခြားနေနိုင်စွမ်းရှိတဲ့ မြေခွေးတစ်ကောင်ဖြစ်ပါတယ်….သူဟာ တစ်စုံတစ်ယောက်ကိုရှာဖွေနေသလို အဲ့ဒီကာလအတွင်းမှာလည်းအချို့သောမြေခွေးတွေကို လိုက်သုတ်သင်နေတဲ့သူဖြစ်တယ်….
နမ်ဂျီအာဆိုတဲ့ကောင်မလေးကတော့ သဘာဝလွန်ဖြစ်ရပ်တွေနဲ့ ပရလောကတွေဟာ တကယ်ရှိတယ်လို့ယုံကြည်နေတဲ့သူဖြစ်ပြီး အဲ့အကြောင်းအရာတွေကို လိုက်လံရှာဖွေပြီး တင်ဆက်နေတဲ့ရုပ်သံလိုင်းကပီဒီတစ်ဉီးပေါ့…….လီယွန်ဆိုတဲ့မြေခွေးဟာ ဘာကိုလိုက်ရှာနေတာလဲ….
ဒီလောကကြီးထဲမှာ လီယွန်လို လူသားပုံဖြစ်နေတဲ့မြေခွေးတွေဘယ်လောက်များနေပြီလဲ…. လူသားတွေကိုရောဒုက္ခပေးနိုင်လား…..သူတို့လို မြေခွေးတွေကို နှိမ်နှင်းနေတဲ့ တခြား မိစ္ဆာကောင်တွေရောရှိနိုင်လား….နမ်ဂျီအာဆိုတဲ့ကောင်မလေးနဲ့ရော ဘယ်လိုတွေ တွေ့ဆုံကြမလဲ….
ဒီဇာတ်လမ်းတွဲက အက်ရှင်ခန်းတွေက တော်တော်မိုက်သလို သဘာဝလွန်စွမ်းအားတွေကိုအသုံပြုပြီး ဗျင်းတဲ့အခန်းတွေဆိုလည်း တော်တော်ကြည့်ကောင်းပါတယ်….စောင့်မျှော်ကြည့်ရှုကြပါကုန်….
Mr. Robot (Season 4) အပိုငျး (၁၃)
Mr. Robot (Season 4) အပိုငျး (၁၂)
Mr. Robot (Season 4) အပိုငျး (၁၀)
Mr. Robot (Season 4) အပိုငျး (၈)
Mr. Robot (Season 4) အပိုငျး (၆)
Mr. Robot (Season 4) အပိုငျး (၅)
Tale of the Nine Tailed (Season 1) အပိုငျး (၂)
The Boys (Season 1) ၊ အပိုငျး (၇)
Emily in Paris (Season 1) ၊ အပိုငျး (၇)
The Girl Who Kicked the Hornet’s Nest (2020)